नेयमारको स्थानमा पाउलो डेबाला ? - Khabar Break | Khabar Break
व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने बलियो आधार अझै तयार भएन : व्यवसायी
ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल, सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति
वेस्टइन्डिजका डवाने स्मिथ इपिएलमा भैरहवाबाट खेल्ने
विद्यार्थीको अनशनपछि मकवानपुर क्याम्मसमा भएको शुल्कबृद्धि निर्णय स्थगन
सालको काठ सहित हेटौँडाबाट दुईजना पक्राउ
नेयमारको स्थानमा पाउलो डेबाला ?
एजेन्सी, पछिल्ला दिनहरूमा ब्राजिलका स्टार नेयमार इटालियन च्याम्पियन टोली युभेन्टस जाने चर्चा छ । बार्सिलोना फर्किने विषयमा अन्यौलता छाएपछि नेयमार पोर्चुगिज स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेको टोली युभेन्टस जान चाहेको बताइएको छ ।
यता, नेयमारले क्लब छोडेपछि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) पनि नेयमारको विकल्पको खोजीमा छ । यस्तैमा नेयमारले क्लब छोड्ने बताएपछि उनको स्थानमा युभेन्टसका अर्जेन्टिनी स्टार पाउलो डेबालालाई लिग वान क्लबमा भित्र्याउने चर्चा चलेको छ ।
एउटा रिपोर्टलमा नेयमारको स्थानमा डेबला फ्रान्स जानसक्ने बताइएको छ । उक्त रिपोर्टमा पीएसजीका खेल निर्देशक लियोनार्डोले नेयमारको स्थानमा डेबाला ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । फ्रान्सको उक्त रिपोर्टका अनुसार नेयमारको स्थानमा डेबालाको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइएको छ । विश्वकीर्तिमान रकममा बार्सिलोनाबाट पीएसजी आएका नेयमारको स्थानमा पाउलो डेबालालाई रोजिएको बताइएको छ ।
डेबाला युभेन्टसका पूर्वप्रशिक्षक मासिमिलियानो अलेग्री क्लबमा छँदा पहिलो रोजाइका खेलाडी थिए । तर, चेल्सीबाट सार्री युभेन्टस गएसँगै उनले कमै स्थान पाउन थालेको बताइएको छ । डेबाला आइतबार हुने टोटनह्यामविरद्धको खेलमा पनि प्रारम्भिक सूचीमा परेका छैनन् । सन् २०१८–१९ मा रोनाल्डोका साथमा खेलेका उनलाई यस सिजन पीएसजीले नजर लगाएको बताइएको छ ।
एपीएफ बन्यो महिलातर्फको भलिबल च्याम्पियन
विश्व क्रिकेट लिग खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा, को-को छन् टोलीमा ?
लिभरपुल अझै अपराजित, वुल्भसलाई हराउँदै बनायो १६ अंकको अग्रता
एथ्लेटिको मड्रिड पराजित
शहीद स्मारक लिगमा आज दुई खेल हुदै
म्यान्चेस्टर युनाईटेडको लज्जास्पद हार
रियल मड्रिड स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको अन्तिम १६ मा प्रवेश
एमसीसी परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री थापा